XOG: DF oo qarinaysa Wasiir uu ku dhacay Covid-19 & qofkii ugu horreeyey oo Muqdisho ugu dhintay | Hadalsame Media
Home Wararka XOG: DF oo qarinaysa Wasiir uu ku dhacay Covid-19 & qofkii ugu...
(Muqdisho) 07 Abriil 2020 – Wararka aannu ka heleeyno magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ay DF qariineeyso Wasiir ka tirsan Maamul-goboleedka Hir-Shabeelle oo xalay saqdii dhexe uu kusoo boodey caabuqa corona.
Warar aan weli la xaqiijin karin oo aanu ka heleeyno ilo muhim ah ayaa sheegaya in Wasiirkan la dhigay Isbitaalka Digfeer oo leh ogsijiin wale casri ah, si neef loo siiyo.
Dhanka kale, waxaa soo baxaya warar sheegaya inuu Muqdisho ku dhintay qofkii ugu horreeyey ee qaba Covid-19.
Ninkan oo ay sheekadiisu dheer tahay ayaa markii hore la geeyey Isbitaalka Digfeer, balse waxaa soo celiyey maamulka Isbitaalka, sida uu warku nagusoo gaarey.
Ninka ayaa deeto la dhigay isbitaal gaar ah oo Muqdisho ku yaaalla, halkaasoo uu ku xanuunsanayey dhowr maalmood, kahor intii aanu dhimanin maanta.
Previous articleCaabuqa Covid-19 oo ku faafa hab aan horay loo sii ogayn (Baaritaan naadir ah oo lagu bilaabay)
Next articleRASMI: DF Somalia oo xaqiijisay geeridii ugu horreeysey ee la xiriirta Covid-19 ee dalka ka dhacda